‘रोमियो एण्ड मुना’मा कसको डानस एक नम्बर ? « Ramailo छ
‘रोमियो एण्ड मुना’मा कसको डानस एक नम्बर ?
तीजलाई लक्षित गर्दै फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ को ‘डानसमा म ए नम्बर’ बोलको गीति भिडियो रिलिज गरिएको छ । कोशिस क्षेत्रीको संगीत, दिनेश राउतको शब्द तथा संगीतकार क्षेत्री, मिना निरौला, झुमा निरौला र दीपा लामाको स्वर रहेको गीतको भिडियोलाई गोविन्द राईले कोरियोग्राफी गरेका छन् । भिडियो यस्तो छ :
भेडेटारको नाम्चे गाउँमा छायाँकन गरिएको भिडियोमा बसुन्धरा भूषाल, सुस्मा कार्की, सृष्टि श्रेष्ठ र मेनुका प्रधान लगायत कलाकारहरु फिचरिङ छन् । नरेश कुमार केसीको निर्देशन रहेको फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’मा विनय श्रेष्ठ र सुष्टि श्रेष्ठ शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । पि एमजी पिक्चर्स र भि मोसन पिक्चर्सको संयुक्त प्रस्तुती रहेको फिल्मका प्रशन्न गोपाली, कविन शाक्य, विनय श्रेष्ठ निर्माता हुन् भने क्यामेरामा दिपाङ्कर सिक्दर र बाबु श्रेष्ठ छन् । करिब नब्बे प्रतिशत छायाँकन सकिएको रोमियो एण्ड मुनाको दुई वटा गीत र केही दृश्यहरु खिच्न बाँकी छन् । माघ २६ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको फिल्मको सम्पूर्ण जसो छायाँकन धरानमा गरिएको छ ।